Nhau - Bata pani fekitori Nissha inokwira zuva nezuva muganho! Kukanganisa kwedenda iri kushoma, uye iyo H1 yekufungidzira mibairo inomuka
0.96 inch TFT kuratidza
10.25 inch TFT kuratidza
Bata pani fekitori Nissha inokwira zuva rega muganho! Kukanganisa kwedenda iri kushoma, uye iyo H1 yekufungidzira mibairo inomuka
Iko kukonzeresa kwenoverengera coronavirus pneumonia (COVID-19, inowanzozivikanwa seya new coronary pneumonia) denda ishoma, Nissha, hombe yekubata pani yekugadzira, yakabudirira kutendeuka kubva pakurasikirwa kuita purofiti kota yekupedzisira. Uye simudza fungidziro yegore rino rezvemari reH1, Simbisa mutengo wemitengo unokwira muganho wezuva nezuva.
Sekureva kweshoko raYahoo Finance, Kubva pa8: 44 am pa14, Nissha yakakwira 18.16% kusvika 976 yen, muganho wezuva nezuva wakabatidzwa, uye yakarova itsva intraday yakakwira kubvira Kukadzi 21.
Nissha akazivisa kota yekupedzisira (Ndira-Kurume 2020) mushumo wezvemari mushure memusika weJapan wekutengesa pamusi wegumi nematatu: Mhedzisiro yechirwere chekorona nyowani yemapapu yakatemwa, Kuda kwekubata mapaneru emafoni / mapiritsi kwakasimba, Mari inotungamirwa yakawedzera ne 8.4% kubva panguva imwecheteyo gore rapfuura kusvika 39,474 yen yen, Iyo yakasanganiswa yekushandisa purofiti inoratidza purofiti yebhizinesi yatendeuka kubva pakurasikirwa kwema 2.458 emabhiriyoni yen munguva imwecheteyo gore rapfuura kuenda kune yakasara ye0.882 yen yen. Iyo yakasimbiswa mambure purofiti, iyo inoratidza iyo yekupedzisira purofiti, yatendeukawo kubva pakurasikirwa kwe2.957 mabhiriyoni yen munguva imwecheteyo gore rapfuura kuenda kune yakasara yemamiriyoni mazana masere nemakumi masere.
Chikamu cheNissha chikamu (chekubata mapaneru) mari mukota yekupedzisira yakawedzera ne16.4% kubva panguva imwechete gore rapfuura kusvika 19.536 yen yen, inoshanda purofiti yaive 1.659 bhiriyoni yen (kushanda kurasikirwa 2.109 mabhiriyoni yen munguva imwecheteyo gore rapfuura); Mari inowanikwa kubva kuchikamu chehunyanzvi hwekurapa (kusanganisira zvigadzirwa zvekurapa uye zvimwe zvinoenderana zvigadzirwa) zvakadonha 7.3% kusvika 5.7 bhiriyoni yen, uye purofiti yekushandisa yakadonha ne48.7% kusvika yen 214 mamirioni.
Nissha akanongedzera, Kunyange hazvo korona nyumoniya nyowani yakakonzera kudiwa kwezvimwe zvigadzirwa kuti zvive zvakadzikira pane zvaitarisirwa, Zvisinei, kudiwa kwemapaneti ekubata emapiritsi kuri nani pane zvaitarisirwa, Naizvozvo, H1 yegore rino (Ndira-Chikumi 2020) huwandu hwemari huripo yakagadziridzwa kubva pane fungidziro yepakutanga yen yen mabhiriyoni makumi manomwe nemakumi manomwe nenomwe, uye kubatanidzwa kwekurasikirwa kwekushandisa kwakadzikiswa kubva pakufungidzira kwekutanga kwemabhiriyoni matanhatu yen kusvika mazuva emabhiriyoni mana. Yuan uye yekubatanidza mambure kurasikirwa kwakadzikiswawo kusvika ku5.2 mabhiriyoni yen kubva kune yekutanga inofungidzirwa 6.9 bhiriyoni yen.
Nissha yakagadziridza yayo yekubata pani yemari tarisiro panguva yeH1 kubva ku32.7 mabhiriyoni yen kusvika 39.2 yen yen.
Nissha akati, Mwaka uno (Kubvumbi-Chikumi 2020), kudiwa kwemapaneti ekubata emafoni uye mahwendefa anotarisirwa kuwedzera panguva imwecheteyo gore rapfuura Chikumbiro chemapaneti ekubata emitambo yemitambo chinotarisirwa kuramba chichigadzikana. mari yemapaneli inofungidzirwa kuwedzera ne7% pagore kusvika 19.664 yen yen.
Nissha inochengetedza mari yayo yekufungidzira yegore rino (Ndira-Zvita 2020) isina kuchinjika; Yese mari ichatapudzwa ne4.6% pagore kusvika kuma 166 mabhiriyoni yen, kubatanidzwa kwekurasikirwa kwekushanda kunofungidzirwa pamabhiriyoni maviri yen, uye kubatanidzwa kwakarasikirwa kwemambure inofungidzirwa ku3.5 biliyoni yen .
Post nguva: Jan-23-2021